ပဋိသန္ဓေတားလျှင် အပြစ်ရှိသလား??? - Myanmar Kid World ပဋိသန္ဓေတားလျှင် အပြစ်ရှိသလား??? ~ Myanmar Kid World
11:30 PM ကိုယ်ဝန်ဆောင်, လူမှုဘ၀
စိတ်ပညာရှင် ပါမောက္ခဂျိမ်းစ်က ဝိညာဉ်ကောင်(ှသကူ)ကို ရှာမရတဲ့ နောက် The thoughts themseives are the thinkers = အတွေးတွေ ဟာ တွေးသူတွေပါပဲ’လို့ အဖြေထုတ်ဖူးပါတယ်။ (Principles p.215)။ သမ္မုတိသစ္စာ(ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲမှုအမှန်)နယ်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတယ်ဆို တာကို ဗုဒ္ဓဝါဒမငြင်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပရမတ္တသစ္စာ(သဘာဝရှိအမှန်)နယ် မှာတော့ ပြောင်းလဲမသွားတဲ့ ထာဝရတည်မြဲနေတဲ့ အထည် ကိုယ်ဒြပ် တစ်ခု မရှိဘူးလို့ငြင်းပါတယ်။
‘ကမ္မ(စွမ်းအား)ကို ပြုလုပ်သူ အတ္တ(ဝိညာဉ်ကောင်)မရှိ၊ အကျိုးကိုခံစားသူ အတ္တကောင် လည်းမရှိ၊ အမှန်မှာ ရုပ်နာမ်ဓမ္မပရမတ္တတရားတို့သက်သက်သာ (ကြောင်းကျိုးဆက်ကာ) ဖြစ်ကြကုန်၏။ ဤသို့ရှုမြင်မှုသည် မှန်ကန်သောအမြင်ဖြစ်၏ (ဝိသုဒ္ဓိ ဋ္ဌ ၂၊ ၂၃၇)
(၃) ပဋိသန္ဓေနေမယ့်သတ္တဝါ အဆင် သင့်ဖြစ် (မ ၁၊ ၃၃၂)’လို့ ပဋိသန္ဓေမှုအတွက် အင်္ဂါသုံးမျိုးရှိပါတယ်။
စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာ အင်မတန်သိမ်မွေ့ပါတယ်။ မိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့ကြည့်လို့ မမြင်ရပါဘူး။ ဗုဒ္ဓ ရှင်တော်မြတ်ကျတော့ သဗ္ဗညုတဥာဏ် အသိဥာဏ် ဝိပဿနာဥာဏ်တွေနဲ့ သိမြင်တော်မူလို့ ‘မိဘတို့၏ သုက်သွေး ဥတုနှင့်တကွ ကမ္ပဇရုပ်သုံးဆယ်ဟူသော ကလလရေကြည်ထဲမှာပင် ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ် စ၍ ဖြစ်၏’ လို့ ဟောတော်မူပါတယ်။
Myanmar Lastest News မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။